Dhibaatada Qaadka iyo Sweden | Somaliska
Khuburada caafimaadka iyo bulshada ayaa walaac ka muujiyay isticmaalka qaadka ee bulshada Soomaalida. Baaritaan goor dhow la sameeyay ayaa la sheegay in 4 tii nin ee Soomaali ah uu 1 isticmaalo qaadka. "Ka waran haddii 40% raga ku nool xaafada Östermalm ee Stockholm ay daroogada isticmaalaan" ayuu yiri Fries oo tirsan qubarada baaritaanka ku haysa qaadka. Asagoo intaas ku daray in Soomaalida Sweden ku nool ay yihiin bulsho aan la maqal lana arkin. Baaritaan uu sameeyay machad ku yaala magaalada Göteborg sanadkii la soo dhaafay ayay ku soo bandhigeen in 51% raka Soomaalida ee Göteborg ku nool ay isticmaalaan qaadka. Frederick Lever oo ka mid ah dadkii baaritaanka sameeyay ayaa yiri "Soomaalida waa koox xirxiran, aad ayay noogu adkaatay in aan helno dad aan wareysano". Khuburada caafimaadka ayaa sheegay in qatarta Qaadka ay tahay mid wayn ayagoo sheegay in uu keeni karo wadnaha oo qofka istaaga, Waali, qofka oo dareema in weerar lagu haayo iyo caloosha oo xiranta qofka ayadoo intaasi ay sii dheertay dhibaatooyinka xaga bulshada sida burburka reerka iyo qofka oo nolosha ka dhaca. Ugu dambeyntii ayay khuburada baaritaanka sameeyay ay walaac ka muujiyeen in isticmaalka qaadku uu ku faafiyo dadyow cusub ayadoo xitaa la soo sheegay dadka Swedish ah oo bilaabay isticmaalka qaadka.
Khuburada caafimaadka iyo bulshada ayaa walaac ka muujiyay isticmaalka qaadka ee bulshada Soomaalida. Baaritaan goor dhow la sameeyay ayaa la sheegay in 4 tii nin ee Soomaali ah uu 1 isticmaalo qaadka. “Ka waran haddii 40% raga ku nool xaafada Östermalm ee Stockholm ay daroogada isticmaalaan” ayuu yiri Fries oo tirsan qubarada baaritaanka ku haysa qaadka. Asagoo intaas ku daray in Soomaalida Sweden ku nool ay yihiin bulsho aan la maqal lana arkin.
Baaritaan uu sameeyay machad ku yaala magaalada Göteborg sanadkii la soo dhaafay ayay ku soo bandhigeen in 51% raka Soomaalida ee Göteborg ku nool ay isticmaalaan qaadka.
Frederick Lever oo ka mid ah dadkii baaritaanka sameeyay ayaa yiri “Soomaalida waa koox xirxiran, aad ayay noogu adkaatay in aan helno dad aan wareysano”.
Khuburada caafimaadka ayaa sheegay in qatarta Qaadka ay tahay mid wayn ayagoo sheegay in uu keeni karo wadnaha oo qofka istaaga, Waali, qofka oo dareema in weerar lagu haayo iyo caloosha oo xiranta qofka ayadoo intaasi ay sii dheertay dhibaatooyinka xaga bulshada sida burburka reerka iyo qofka oo nolosha ka dhaca.
Ugu dambeyntii ayay khuburada baaritaanka sameeyay ay walaac ka muujiyeen in isticmaalka qaadku uu ku faafiyo dadyow cusub ayadoo xitaa la soo sheegay dadka Swedish ah oo bilaabay isticmaalka qaadka.